Semalt: Google Analytics Referrer Spam. Itsva Uye Chinangwa Chayo.
Kuparadzaniswa mumabhadharo eGoogle Analytics idambudziko rinowanzo mazuva ano anogara achiuya nenzira mbiri dzakasiyana: bot kutumira spam uye mweya kutumira spam. Ryan Johnson, the Semalt Mutariri Wakabudirira Muteereri, anoti kushandiswa kwekutengesa spam ndeyekusangana kwevanhu chaivo vanoshanyira webusaiti yako kana bhurogi, zvichiita Google Analytics kuverenga ruzivo rwekutsvaga. Izvo mweya yekutsvaga spam ndiyo kukohwa kwebhoti iyo inodarika webhusaiti uye inorova seva Google Analytics zvakananga. Havana chaizvoizvo kushanyira webhusaiti yako, uye kunyengedza Google Analytics kuverenga peji maonero uye masangano. Nokudaro, izvi zvikamu zviviri zvakasiyana kune mumwe, asi zvose zviri zviviri zvinogona kuparadza data yako ye analytics kusvika pamwero - x208 nokian.
Zvinogona kutumira spam kukuvadza mawebsite kana mabhuku?
Chokutanga pane zvose, rega ndiite kuti zvive pachena kuti kuendesa mberi kweGoogle Analytics kunowanikwa apo vanokuvadza kana vanotsvaga vanoedza kutumira data yakaipa kumabhuku enyu eGoogle Analytics. Vanoshandisa Zvimwe Zvinyorwa Zvirongwa zvekuita izvi nekuunganidza IP mazita evanhu vakawanda. Vanowanzoendesa peji yenhema maonero kuGoogle Analytics account nekubatsirwa neUI dzeAIDS dzekutsvakurudza, vachikudzidzisa nemashoko ekutsvaga kwemasayiti akakwirira uye mabhuku.
Chinangwa che spammers nevashambadziri ndechekuita kuti iwe uone pane zvavanobatana nazvo uye ugova nemari yakawanda kubva kune ivo pachavo..Vanogona kupa mazamu ehurumende kana kuti kukumanikidza kuenda kune mapeji anonyunyuta kana anotapukira. Nzira yakanakisisa ndeyokushanyira mawebsite e spammer kana mabloggi kana uchida kuvimbisa kuchengetedza kwako nekudzivirira.
Hapana zvakashata zvakananga kune webhusaiti yako, kunze kwekuwanda kwehuwandu hwamunowana zuva rega rega. Uyewo, mabhigi anowanikwa mumasevhisi, uye maitiro eSOO haagoni kukubatsira kuvadzivisa zvachose. Va spammers nevaseki vanoda chimwe chinhu kunze kwekuisa nzvimbo yavo mumiti yekutsvaga injini nekutsvaga mapeji enyu ewebhu mushure mokukwikwidza. Nokudaro, havana chavanoita newebsite yako kusvikira kana vasati vasarudza kubira mashoko ako ega.
Ndiyo nzira chaiyo here?
Kungofanirwa kujekesa, Google Analytics referrer spam haisi yechokwadi. Vakomana vari shure izvi havana kumboshanyira webusaiti yenyu asi vakatumira zvikumbiro zvisina kufanira kuvanhoroondo dze analytics kuburikidza nedzimwe bots. Vacharatidza muReferrer Sites list kana iwe uchitarira Kuwana> All Traffic> Referral area. Vanowedzera nzvimbo yako yebhanise yekutengesa uye kuderedza kushanduka kwayo. Vanoparadzi nevanokuvadza vanongobereka chero ipi zvayo yeUA-XXXXY-Z yehupfumi uye vanotumira zvinyorwa kana zvikumbiro zvekuparadza bhizinesi renyu paIndaneti.